Baker-Olimpico Full Daabacaadda silikoon cajiin / Fondant Mat - Shiinaha Baker-Olimpico Full Daabacaadda silikoon cajiin / Fondant Mat qeybiye,-SHQD Factory
dhumucdiisuna: 0.45mm (+/-0.05mm)
miisaanka: 2.4 oz / 68g (+/- 5g)
Baker-Olimpico ayaa muhiim u ah wax xumu of derin ah, waxaan dooran heerka ugu sareeya ee Maro adag iyo Besian silicone dareere uu noqdo Maro adag material.The cayriin u muuqataa mid aad u cad iyo nusqaamaha ka jira xad siman kasta oo kale. Dhanka, silicone dareere Besian qabanayo si aad u wanaagsan, barti xoog, milicsiga iftiin wacan, siman geesaha, ma laalaabka leh iyo qashin.
Intaa waxaa dheer, Baker-Olimpico leeyahay xirfadaha daabacaadda ka xoogbadan, iyo qabsadey muhiimadda badan macaamiisha’ waayo-aragnimo. printings waa sare cad oo weligiin ma turunturoon off ka dib markii marar badan soo noqnoqda isticmaalka, oo dadka ka caawiya in loo fududeeyo habka karisid. Iyo khad daabacaadda waxaa sidoo kale laga sameeyey oo silicone kaas oo la ansixiyey FDA iyo LFGB, taas oo ah in la caddeeyo waa non-sun oo ka dhigi macaamiisha dareemaan amaan.
Baker-Olimpico dhumucdiisuna derin cajiin waa badan sii dhumuc weyn oo ka badan dabacsan badan dermaha suuqa, taas oo amaan u jaraya cookie oo u dhow 3000 jeer soo noqnoqda isticmaalka sabab u ah oo dhumucdiisuna waxay ka xoogbadan, iyo alaabta ceeriin oo tayo sare leh. Waa maxay more, Baker-Olimpico derin cajiin leh iska caabin heerkulka aad u fiican(-40℉ in 480℉), dabacsanaan kaamil ah.